मलाई पनि राम्रो पुरुषले हेरोस् भन्ने लाग्छ, मेरो पनि मन छ, हेण्डसम पुरुष देख्दा इमोशन जाग्छ : सावित्री सुवेदी ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
May 14, 2021 AdminLeaveaComment on मलाई पनि राम्रो पुरुषले हेरोस् भन्ने लाग्छ, मेरो पनि मन छ, हेण्डसम पुरुष देख्दा इमोशन जाग्छ : सावित्री सुवेदी ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
काठमाडौ । सावित्रा सुवेदीको नाम थाहा नपाउने अहिले महिला अधिकारका पक्षमा बोल्नेहरुले नसुनेको नाम पक्कै होइन । उनले गरेका कतिपय कृयाकलाप विवादित पनि बन्ने गरेका छन् । केही समय अघि उनले काठमाडौको माइतीघर मण्डलामा पेटिकोट मात्र लगाएर गरेको आन्दोलन चर्चामा थियो । त्यस्तै उनले कपाल मुण्डन गरेको अभियान पनि चर्चामा रह्यो ।
कतिपयले ति अभियानलाई सकारात्मक रुपमा लिए भने कतिले त्यसलाई विवादित बनाए । खास गरी जय नारीका रुपमा परिचित सावित्रीले आफ्ना केही अंतरंग कुराकानी पनि गरेकी छन् । धेरैजसो पाइन्ट सर्ट लगाएको देखिने सावित्री नयाँ वर्षमा साडी लगाएर देखा परिन् । उनले आफ्नो पहिरनलाई लिएर कसैले छक्का कसैले केटा हो की भनेर गर्ने गरेको टिप्पणी प्रति पनि प्रतिकृया दिएकी छन् ।
उनले आफु पनि एक स्वस्थ्य र पुर्ण महिला भएको बताएकी छन् । उनले आफुलाई अरुले गलत नजर नहेरुन र त्यस्तो कुनै अवस्था आयो भने प्र ति कार गर्न सकियोस् भनेर सजिलो लुगा लगाउने गरेको बताएकी छन् । आफ्नो वाहिरी पहिरन जे भएपनि आफुमा एउटा महिला मन भएको उनको भनाई छ । म सुन्दर पुरुष प्रति आकर्षिक हुन्छु, मेरो पनि पार्टनर छ ।
मानिसको नीजि र सामाजिक जिवन हुन्छ । म सामाजिक जिवनमा महिला अधिकारका कुरा गर्छु भने नीजि जिवनमा मेरो पार्टनरसंग रमाउँछु । मेरो नीजि जिवन सार्वजनिक गर्न जरुरी छैन, उनको भनाई छ, आफ्नो पनि पार्टनर भएको र उनीसंग खुसी हुनेगरेको पनि बताएकी छन् । उनले आफुलाई छक्का र हिजडा भन्दा दुख नलाग्ने पनि बताइन् ।
उनले भनिन् मलाई पनि राम्रो पुरुषले हेरोस् भन्ने लाग्छ, मेरो पनि मन छ । मलाई पुरुष मन पर्छ । मेरो व्वायफ्रेण्ड छैन भने म स्वास्थ्य महिला हुँदिन, पुरुष देख्दा इमोशन जागेन भने म महिला नै होइन र । थप हेर्नुहोस् भिडियोमाः